A na - emepụta biogas site na mkpofu ahịhịa | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
A na - ewepụta biogas site na ihe mkpofu osisi
Portillo nke German | | Biogas
Taa enwere uzo di iche iche nke imeputa ume site na mkpofu di iche iche. Iji ihe mkpofu eme ihe iji nweta ume bụ usoro dị mma iji chekwaa na akụrụngwa ma nyere aka ịkwụsị ịdabere na mmanụ ọkụ.
A na-ahụkarị sunflower nke Mexico dị ka osisi na-emerụ ahụ n'akụkụ dị iche iche nke Africa, Australia, na agwaetiti ndị ọzọ dị na Pacific Ocean. Ndị na-eme nchọpụta si mahadum abụọ dị na Naịjirịa nọ na-arụ ọrụ na nyocha nke na-akwalite ihe omumu nke biogas na mmezi nke oma site na ulo ozuzu okuko na anumanu ndi a.
1 Nweta biogas ma nwekwuo arụmọrụ
2 Ukwuu arụmọrụ na a ọgwụgwọ tupu
Nweta biogas ma nwekwuo arụmọrụ
Ratingmepụta biogas sitere na sunflower na nsị anụ ọkụkọ bụ ezigbo echiche, ebe anyị nwere nnukwu nsogbu abụọ: ọgwụgwọ ihe mkpofu ubi na egwu nke ụmụ amaala nke anwụflower Mexico kpatara. Na mbu, ma na Nigeria ma China, a na-eme nyocha iji nweta biogas a. Ebumnuche bụ iwepu mwakpo nke osisi a na ebe ọ na-ewepụ ụmụ afọ ala ebe ọ bụ na ndị na-eme nchọpụta mahadum na ndị otu IUCN (International Union for Conservation of Nature) nke otu ụdị na-atụ egwu na-egosi na ndị a na-acha anwụ anwụ dị oke egwu na ụfọdụ echekwara. mpaghara okike.
Naịjirịa so na mba ndị ihe na-emetụta osisi a na ọ bụ ya mere na ha anaghị akwụsị ịchọ ụzọ ọzọ iji kwụsị mgbasa ya. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na ha na-anwa ịkwụsị osisi a kamakwa iji mkpofu ya. Ihe omumu nke ulo akwukwo nke Landmark na nke ndu, nke edeputara na akwukwo a Ike & mmanụ, na-egosi na ihe fọrọ nke mmiri ozuzo ndị a nwere nnukwu arụmọrụ na mmepụta nke biogas. Nke a na-eme site na nsị nke nsị nke sunflowers na anụ ọkụkọ na ọgwụgwọ ọgwụgwọ gara aga.
Ukwuu arụmọrụ na a ọgwụgwọ tupu
E nwere ọtụtụ ụzọ iji mepụta biogas. Enwere ike iji biogas mepụta ume ebe ọ nwere nnukwu calorific uru. Ọmụmụ ihe nyochara a tupu ọgwụgwọ nke ulo ozuzu okuko n'efu na foduru nke Mexico sunflowers ka mụbaa mkpụrụ na mmepụta nke biogas nke karịrị 50%. Mkpebi nke ọmụmụ ahụ gosipụtara mmụba nke 54,44% na mkpụrụ ndụ biogas nke sitere na nnwale nke e mere tupu a gwọọ ya ma jiri ya tụnyere nke a na-agwabeghị na mbụ.
Iji chọpụta ma ọ bụrụ na arụmọrụ ahụ na-ekpuchi ike e ji mee ihe tupu ọgwụgwọ ahụ, a na-emezi nguzo ike. Na nguzozi ike, a na-amụ ike nke na-abanye na sistemụ, yana nke dị mkpa maka usoro mmepụta ọ bụla nke biogas, a na-atụlekwa ike na-ahapụ usoro ahụ. N'ụzọ dị otu a, ị nwere njikwa zuru oke na mmepụta na iji ike n'oge niile.
Ọfọn, na ike itule na rụrụ, ọ chọpụtara na ike dị mma ma zuru ezu iji kwụọ ụgwọ nke ọma maka ike ọkụ na ọkụ eletrik nke ejiri rụọ ọrụ ọgwụgwọ thermo-alkaline.
Buru n'uche na nsị anụ ọkụkọ nwere ike ịnwe nri, homonụ, ọgwụ nje na ọla dị arọ nke a gbanyere n'ime ala na mmiri. Ihe a niile nwere ike imerụ ala na mmiri ebe a hapụrụ ha. Ọ bụ ya mere eji ihe nsị ndị a maka imepụta biogas ziri ezi n'ụzọ zuru oke, ọ bụ ezie na amaara ya na n'onwe ha ọ baghị uru ịgbanwe ha n'ime biogas. Iji bụrụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma, a ga-agwakọta ha na akụrụngwa akụrụngwa dịka sunflower Mexico.
N’ikpeazu, enwekwara mkpuru osisi ndi ozo na mba ndi ozo dika Mexico ma obu Taiwan ebe ha na-ezube igbanwe ha ka ha buru mmanu ndi ozo dika ethanol ma jirikwa ha muo iji biomethane.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » Biogas » A na - ewepụta biogas site na ihe mkpofu osisi
Ọ bara uru nke ukwuu. Ụmụ mmadụ enweghị omenala gburugburu ebe obibi. Daalụ
Ike dị iche iche na-enweghị nkwụsị na WaveStar